ငယ်ကချစ်တဲ့ မမသဲ ( စ/ဆုံး ) – Grab Love Story
ငယ်ကချစ်တဲ့ မမသဲ ( စ/ဆုံး )
နွေဦးကာလတစ်ခု၏တိမ်ထူသော ညနေခင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်တော်နှင့်မမသဲတို့ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်က လူပျိုပေါက်အရွယ် ရှစ်တန်းနှစ်တက်ရန် ကျောင်းပိတ်ထားသောအချိန်၊ မမသဲက ၁၀တန်းကို နှစ်ခါကျပြီး ကျောင်းပြန်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေသော ကာလ၊ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတသိုက် မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆော့ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ပိုက်ကျော်ခြင်းခတ်ရန်အတွက် မြေကွက်လပ် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိသော ကျော်စိုးတို့အိမ်ရှေ့တွင် ခြင်းကွင်းဖောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်စိုက်ရန်အတွက် တွင်းတူးနေရင်း ကျော်စိုးအသံကြောင့် ကျော်စိုးမေးငေါ့ပြရာသို့ မျက်လုံးကိုဝေ့ကြည့်မိသည်။ တဘက်ခြံရှိ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထဲမှ ညိုလဲ့ရွှမ်းစိုသော မျက်ဝန်းတစ်စုံနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးမိသည်။ ဖိုကနဲ
ဖြစ်သွားသော ရင်သည် ရှက်ဝဲဝဲဟန်နှင့် တဘက်သို့ လှည့်သွားသောပြုံးတုံ့တုံ့မျက်နှာပေးကြောင့် ပိုကာ အခုန်မြန်ရ၏။
‘ငါတို့ထက်တော့ အသက်ကြီးမယ်ကွ မိုက်တယ်နော်ဟေ့ကောင်’
ကျော်စိုးစကားကိုသူဘာမှမတုံ့ပြန်မိ။ သူ့အာရုံတွေသည် ခေါင်းအငုံ့တွင်
၀ဲကနဲဖြစ်သွားသော ဆံပင်ရှည်ရှည်များပေါ်တွင်သာ၊ အဲဒီညက သူ့အိမ်မက်ထဲတွင် ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် နတ်သမီးတစ်ပါးဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
‘ဒါ သဲသဲဇော် တဲ့’
မိတ်ဆက်ပေးသောသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကေသီ့စကားအဆုံးတွင် ပျောက်ဆုံးသွားသော အရာတခုကိုပြန်ရလိုက်ရသလို ခံစားရသည်။ သူမကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကေသီ့အလှူပွဲတွင် ဆုံဆည်းရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မထားမိ။ ရွှမ်းစိုနေသော မျက်ဝန်းအစုံကိုစိုက်ကြည့်ရင်း
‘ကျွန်တော့်နာမည် အောင်မော်သန့် ပါ’
‘မင်းကို မ သိပါတယ်ကွာ၊ မင်းဇော်တို့အိမ်ရှေ့မှာ ခြင်းခတ်နေကြမဟုတ်လား’
‘ကဲကဲ ..တယောက်နဲ့ တယောက်သိပြီးသားတွေ ဆိုတော့ တလက်စတည်းပြောရဦးမယ်.. မမသဲကို နင်ပြန်လိုက်ပို့ပေး အောင်’
‘ဘာလဲ လိုက်မပို့ ပေးချင်လို့လား ရပါတယ်’
‘ဟာ မဟုတ်ပါဘူး..ပြိုင်ဘီးဆိုတော့ တင်စရာနေရာက ရှေ့ဘားတန်းပေါ်ကပဲရှိတာလေ၊ အဲဒါ မ ကို အားနာလို့ပါ’
ထိုစဉ်က မောင်နှမတွေပဲဟာ ဟုပြောသော မမသဲနှင့်ကျွန်တော်သည် ရည်းစားမက ချစ်သူမကျ အခြေအနေသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ခဲ့ရိုး အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
နင်းထွက်ကာစပြုနေသော စက်ဘီးရှေ့ ဘားတန်းပေါ်သို့ခုန်အတက် မ ၏ ကိုယ်လေးက ယိုင်သွား၏။
ယိုင်ထွက်သွားသောကိုယ်လေးကို လက်တဘက်ဖြင့် ထိန်းအလိုက်တွင်မတစ်ကိုယ်လုံးကသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်လာ၏။ သူ့ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ ညီလေးကလည်း ရုတ်တရက်မာတင်းလာ၏။ တစ်ယောက်တည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ကာ
မျက်နှာကို အောက်သို့ချကာမှ ပိုဆိုးသွားသည်။ အင်းကျီလည်ပင်းပေါက်မှတဆင့် မြင်လိုက်ရသည်က ဘရာစီယာ အနက်ရောင်လေး၏အထက်တွင် လျှံထွက်နေသော ၀င်းဝါကာရွှေရောင်တောက်နေသော မ ၏ရင်သားလှလှတစ်စုံ။ စက်ဘီးက ချိုင့်ထဲသို့အကျ မာတင်းနေသောညီလေးကလည်း မ ၏ခါးလေးကို ထောက်အမိ၊ မ ခါးလေးကော့ကနဲဖြစ်သွား၏။
သူမဘာသာပြောသလိုဖြင့်ပြောသော မ၏အပြောကြောင့် သူမျက်နှာမထားတတ်တော့။
မတို့ လမ်းထိပ်နားအရောက်တွင် မ က ရပ်ရန်ပြောသည်။ စက်ဘီးပေါ်မှအဆင်းတွင်
‘သွားတော့မယ်နော်.. မ တို့အိမ်ကဟိုအိမ်လေ.. ကြုံရင် ၀င်လည်ပေါ့’
ပြုံးစစဖြင့် ပြောသောမ၏စကားကြောင့် သူ မလုံမလဲဖြစ်မိသည်။ ခြံဝင်းတံခါးကိုဖွင့်ဝင်ကာ အိမ်ပေါ်သို့ အပြေးကလေးတက်သွားသော မ၏တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းလေးနှစ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်း သူ့ညီလေးကတော့မာတင်းလျှက်။ တကယ်ပါဗျာ အဲဒီတုံ့ကတော့ မိန်းမတယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ဟာ ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့ ဘွားဘက်တော်ကို
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ခြင်းခပ်ရာခြင်းကွင်း၏ ဘေးရှိ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ မမသဲက တစ်ရက်ခြား တခါလောက်လာထိုင်တတ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း
မမသဲကျုရှင်အဆင်းကို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက် သွားစောင့်တတ်၏။ အားလုံး၏အမြင်တွင် ကျွန်တော်နှင့် မမသဲသည် သမီးရည်းစား။ သူငယ်ချင်း ကျော်စိုး ဆိုလျှင်
‘မင့် အဆော်ကြီးရဲ့အိုးကြီးတွေကတော့ကွာ… မင်းတော့ အတော်ဖြိုယူရလိမ့်မယ် ဟေ့ကောင်’
ဟု မမသဲကိုမြင်တိုင်း သွားရည်တမြားမြားဖြင့် ပြောတတ်သည်။ ဒီလိုနှင့်သုံးလလောက် အချိန်အတောအတွင်းတွင် မမသဲနှင့် ကျွန်တော်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြသည်။
ချိန်းတွေ့လေ့ရှိတဲ့နေရာတွေက မမသဲ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ခင်မိုးနွယ်တို့၏စာအုပ်ဆိုင်နှင့် မမသဲတို့လမ်းထိပ်ကွမ်းယာဆိုင်မှ မအေမြင့်တို့၏ အိမ်တို့တွင်ဖြစ်သည်။ တစ်ညနေတွင် မမသဲနှင့် ချိန်းထားသဖြင့် ခင်မိုးနွယ်တို့၏ စာအုပ်ဆိုင်သို့အသွား..
ဆိုင်ရှေ့တွင် လူတယောက်မှမတေသဖြင့် အိမ်ထဲသို့ သူအော်ခေါ်လိုက်၏။
‘အေး လာပြီ လာပြီ…’
မခင်မိုးနွယ်အိမ်ရှေ့သို့အသံပြုရင်း ပြေးထွက်လာသည်။ သူ့ကိုအတွေ့တွင် မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီရဲလျှက်
‘မကြာသေးဘူး မ အခုမှရောက်တာ’
ဟုရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်ပြောကာ လှေခါးပေါ်သို့လှမ်းအတက် ၀တ်ထားသည့် ထမီအောက်စကို သူ့ဘာသာတက်နင်းမိကာ မျက်လုံးထဲတွင် ဝင်းကနဲဖြစ်သွားသည်။ မြင်လိုက်ရသည်က ဝင်းဝါကာဖြောင့်တန်းနေသော ပေါင်တန်တစုံ။ ထို၏အထက်တွင်မှ စိမ်းလန်းသော တောအုပ်တစ်ခုကဲ့သို့ အမွှေးများထူထပ်စွာ ပေါက်နေသော မခင်မိုးနွယ်၏ ကိုယ်ပိုင်ပစည်းတစ်ခု၊ ထိုမှနောက်တွင်တော့ ကြီးမားအယ်ထွက်နေသော တင်ပါးကြီးတစ်စုံနှင့်သေးကျင်သော ခါးလေးတစ်ခု၊
သူသတိဝင်လာချိန်တွင် သူ့ငပဲကြီးကဝတ်ထားသော ပုဆိုးအောက်မှ ငေါငေါကြီးရှေ့သို့ တိုးထွက်လျှက်၊ မခင်မိုးနွယ်က ကျွတ်သွားသောထမီကို ပြန်ကောက်ဝတ်ပြီး ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန်ဖြင့် သူ့ကိုအကြည့်တွင် ပုဆိုးအောက်မှ ငေါထွက်နေသော သူ့ငပဲကြီးကို သတိထားမိသွားသည်။
ဟုရေရွတ်သံကိုကြားရသည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ဘာစကားစပြောရမှန်း မသိအောင်ဆွံ့ အနေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်
ဟူသောချောင်းဟန့်သံတစ်ခုက တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းသွားသည်။ လှည့်အကြည့်တွင် ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေမှန်းမသိသော မမသဲ ကိုတွေ့ရသည်။ မမသဲက ကျွန်တော့်မျက်နှာကို တလှည့် ငေါထွက်နေသော ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို တလှည့်ကြည့်ကာ မခင်မိုးနွယ်ဘက်သို့လှည့်ပြီး
‘ကောင်မနော်…ကောင်မ.. ငါအစအဆုံးမြင်တယ်… ဟင်း’
‘မဟုတ်ပါဘူး သဲသဲရယ် မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ၊ ပြီးတော့လည်း ဘာဖြစ်လည်းဟာ.. ကိုယ့်မောင်နှမချင်းတွေပဲဟာ.. မောင်လေးက အခုမှကလေးပဲရှိသေးတာကို’
‘သြော် ဒါကြီးက ကလေးလား၊ ခုနက နင်မမြင်လိုက်ဘူးလား’
ကျွန်တော့်ဘက်သို့မေးငေါ့ပြပြီး မကပြော၏ တဆက်တည်း
‘ဟင်း… မုန့်သာဝေစားမယ်နော် ဟိုဟာတော့ ဝေမစားနှိင်ဘူး’
ထိုအချိန်တုံးက မ ပြောသောဟိုဟာဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကိုပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုစဉ်က ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။
ရှေ့မှနေကာ ဘောက်ဆတ်ဘောက်ဆတ်နှင့် လျှောက်သွားသော မ နောက်သို့ ကျွန်တော်ကုတ်ကုတ်ကလေး လိုက်သွားသည်။
ဟုစိတ်မရှည်သောအသံဖြင့် အော်မိသည်။ ထိုအခါမှ
‘ဟင်း.. တစ်ယောက်ကလည်း သူ့ဟာတွေပြချင်လို့ ထမီကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်မဝတ်ဘူး၊ တစ်ယောက်ကလည်း ကလေး ကလေးနဲ့ အံ့ပါရဲ့တော့်..ကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ’
‘ဘယ်သွားမလဲဟင် မ ‘
‘အတော်ပဲ အတော်ပဲ နင်တို့လာတာ … ငါလည်း အခုပဲ ကိုမြင့်သိန်းတို့အမေအိမ်သွားမလို့
ညနေလောက်မှပြန်ရောက်မယ်.. နင်တို့နှစ်ယောက် အိမ်စောင့်ပေးပေတော့’
ဟုမမြင့်မြင့်အေးကပြော၏။ မ က
‘ရပါတယ် အမရယ်… အေးအေးဆေးဆေးသာသွား.. သမီးတို့အိမ်စောင့်ပေးထားမယ်’
ဟုပြန်ပြော၏ ခြင်းတောင်းကိုဆွဲကာ တင်ပါးကြီးများကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် လျှောက်ကာထွက်သွားသော မမြင့်မြင့်အေး၏ နောက်ပိုင်းကို ဘာရယ်မဟုတ် သူငေးကြည့်မိသည်။
မ ကအိမ်၏တံခါးအကွယ်တွင်ထိုင်နေရာမှလှမ်းခေါ်၏။ တောက်လျှောက်အပြစ်တွေချည်းပဲ လုပ်ခဲ့မိသဖြင့် သူကုတ်ကုတ်ကလေး မ အနားသို့ကပ်သွား၏။
‘ဘာလဲဟင် မ ‘
သူ့ပေါင်ပေါ်တွင်ခေါင်းတင်ကာအိပ်နေသော မ မျက်နှာလေးကိုကြည့်ကာ သူရင်တွေပူလာ၏။ မ လက်မောင်းလေးကိုဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ကာ
‘ မ… ‘
သူတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သည်။ မ ကပြန်မထူး။
သူ့ခေါ်သံနောက်တစ်ခွန်းအဆုံးတွင် မ မျက်လုံးလေးများ ပွင့်လာပြီး သူ့ကိုပြန်ကြည့်ကာ
‘အင်း ကလေးကို မုန့်ပေးကြိုက်မိတော့လဲ ခက်ပါတယ်လေ’
မ စကားကြောင့် စိတ်ထဲတွင်ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး
‘ကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာနဲ့ သက်သေပြမလဲ’
သူ့အမေးကို မ ကမဖြေ။ ပြုံးစစဖြင့် မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ အိပ်နေသော မ မျက်နှာကို ကြည့်ရင်းသူရင်တွေပူလာ၏။ အရဲစွန့်ပြီး မ၏ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကိုနမ်းလိုက်၏။ မ က သူ့ပေါင်ပေါ်တွင်အိပ်နေရာမှ
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူ့လည်ပင်းကိုသိုင်းဖက်ကာ သူ့ပါးတဖက်ကိုနမ်းသည်။ သူ့ပါးပြင်ထဲတွင် သူမ၏ နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးကိုနှစ်ကာ တစ်မိနစ်ခန့်ကြာအောင် နမ်းသောသူမ၏ အနမ်းကြောင့် သူရင်တွေ တလှပ်လှပ်ခုန်လာသည်။ သူကလည်း အားကျမခံ မ ၏ပါးပြင်ကို ခပ်ကြာကြာလေးပြန်နမ်းလိုက်သည်။ ထိုမှတဆင့် မ ၏မေးရိုးလေးတလျှောက်ကို နှာခေါင်းရော၊ နှုတ်ခမ်းပါသုံးကာ မိနစ်ဝက်ခန့်ကြာအောင် နမ်းသည်။
လည်ပင်းနှင့် မေးရိုးအဆက်နေရာလေး အရောက်တွင် မ ကိုယ်လေး တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး နှုတ်မှ မပီသသောငြီးငြူသံလေးတစ်ခုထွက်လာ၏။ သူနမ်းနေရာမှပြန်ခွာလိုက်ပြီး မ၏မျက်လုံးများကို စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ မ ကရီဝေသော မျက်လုံးများဖြင့် သူ့ကိုပြန်ငေးကြည့်သည်။ မ၏ မျက်လုံးများသည် တစုံတခုကိုတောင်းခံနေသလို။
သူဘာကိုမှမစဉ်းစားတော့ပဲ မ ၏ဖူးဖူးလေး တွဲကျနေသော အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်သည်။ သူ့အနမ်းကို မကအလိုက်သင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်၏။ မွတ်သိပ်နေသော နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် ဂဟေဆက်ထားသကဲ့သို့။ သူက မ၏ကိုယ်လေးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်အလိုက်တွင် မကသူ၏ကျောပြင်ကို သူမ၏လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့် ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်နေ၏။
သူ၏အနမ်းတို့ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ မ ကလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်လည်တုံ့ပြန်သည်။သူ၏ လျှာ ကို မ ၏ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ချိန်တွင်တော့ မ၏ လက်သည်းရှည်ရှည်များက သူ့ကျောပြင်ကို စူးကနဲ။ သူ့ရင်တခုလုံးပူလာသည်။ ညီလေးကလည်း မာတင်းလျှက်။
နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းနေရင်းမှ သူ၏လက်တဖက်က မ၏လည်ပင်းတလျှောက်ကို လက်ထိပ်လေးများဖြင့် ညင်သာစွာပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ ထိုမှတဆင့် ရင်ညွန့်လေးဆီသို့။ သူ့စိတ်တွေထကြွလာကာ မ ၀တ်ထားသော ဘလောက်စ် အင်းကျီ၏အပေါ်ဆုံး ကြယ်သီးလေးကို လက်တဘက်တည်းဖြင် ဖြုတ်လိုက်သည်။ ကြယ်သီးက
အလွယ်တကူပြုတ်မသွား။ သူ့စိတ်ထဲတွင် မရှည်တော့။ အင်းကျီကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ဆွဲချလိုက်သည်။
ထိတ်လန်.သွားသောရေရွတ်သံတခုနှင့်အတူ မက သူ့ရင်ဘတ်ကိုဆောင့်တွန်းလိုက်ကာ သူ့ကိုတွေတွေလေး ကြည့်နေ၏။ ထို့နောက် အတွင်းခန်းထဲသို့ အပြေးလေးလှမ်းဝင်သွားသည်။ သူဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပဲ တမိနစ်ခန့်
ကြောင်ပြီးရပ်နေမိသည်။ ထိုတစ်မိနစ်သည် သူ့အတွက်တော့ ကမ္ဘာတစ်ခုလောက် ကြာသည်ဟုထင်ရသည်။
အိမ်အတွင်းခန်းဆီမှ မ ၏ ခေါ်သံသဲ့သဲ့ကို ကြားရသည်။ သူရပ်နေရာမှသတိဝင်သွားပြီး အတွင်းခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ ခုတင်စွန်းတွင် တင်ပါးလွှဲလေးထိုင်နေသော မ၏ကိုယ်ကောက်ကြောင်းသည် သူ့ကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်အောင် ဖမ်းစားနှိင်သည်။ သူဘာကိုမှမစဉ်းစားတော့။ မ ကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်လိုက်သည်။ သူ့ကိုပြန်ဖက်ထားသော မ၏ လက်များကလည်းတင်းကျပ်လျက်။
မ ကသူ့ကျာပြင်ကို သူမ၏လက်ဖဝါးလေးများဖြင့် ငြင်ငြင်သာသာလေးပွတ်သပ်ရင်းဖြင့် တိုးတိုးလေးပြော၏။
‘ကျွန်တော်လည်း မ ကိုအရမ်းချစ်တာပဲ မ ကိုမခွဲနိုင်ဘူးဗျာ’
သူကပြောရင်းဖြင့် လက်တဖက်က မ၏ကားစွင်.သော တင်ပါးကြီးကို ပွတ်သပ်ပေးနေ၏။ ထို့နောက် မ ၏ တင်ပါးအစုံက ကိုင်ရတာ အရသာရှိလွန်းလှသည်။ သူ့လက်ခလယ်ကို မ၏တင်ပါးအကွဲကြောင်းလေး တလျှောက်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ အကွဲကြောင်းလေး၏ အဆုံးသတ်အရောက်
သူ့လက်ခလယ်လေးကို ထောက်လိုက်စဉ်တွင် မ ခါးလေးကော့သွား၏။
သူ အချိန်သိပ်မဆွဲချင်တော့။ မ၏ ခါးလေးကို သိမ်းဖက်ကာ မ ကိုခုတင်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်သည်။ နှင်းဆီရောင်သန်းနေသော နှတ်ခမ်းတစ်စုံ က ခပ်ဟဟလေး ပွင့်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေ၏။ ခပ်တွဲတွဲလေး ဖြစ်နေသော မ၏။ အောက်နှတ်ခမ်းလေးအား သူ့နှတ်ခမ်းအစုံဖြင့် စုပ်ယူလိုက်သည်။ သူ့ကိုသိုင်းဖက်ထားသော မ လက်များက ပိုမိုတင်းကျပ်လာ၏။
သူနောက်လက်တဖက်ဖြင့် မ ဝတ်ထားသော ရင်စေ့အင်္ကျီ၏ ကြယ်သီးများကိုတလုံးချင်း ဖြုတ်လိုက်သည်။ ဘရာစီယာအနက်ရောင်လေး၏ အောက်မှ အပြင်သို့တဝက်ခန့်လျှံထွက်နေသော မ ဧ။် ရင်သားအစုံကေ၇ွှဝါရောင်ပေါက်နေသည်။
သူ့လက်ကို မဧ။်နောက်ကျောဖက်သို့ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာချိတ်လေးတစ်ခုကို အရင်ဖြုတ်လိုက်သည်။ နောက်ထပ် ချိတ်တစ်ခုအရောက်တွင် ချိတ်ကတော်တော်နှင့် ဖြုတ်မရ။
မ ၏နှတ်မှ စိတ်မရှည်သလိုရေရွတ်သံကို ကြားလိုက်ရပြီး ကျောလေးကို ကော့အပေးတွင်
ပြေလျော.သွားသော ဘရာစီယာ အနက်ရောင်လေးကို သူပိုင်ပိုင်နှိင်နှိင် ဆွဲယူပြီး အောင်ပရွဲ စစ်သူကြီးတယောက်လို ခုတင်ခြေရင်းဘက်သို့သူ ပစ်လိုက်သည်။ ပန်းသစ်တော်သီးလေး နှစ်လုံးတင်ထားသလို မို့မို့လေးဖြစ်နေသော မ၏ ရင်သား အစုံ က လှပလွန်းလှ၏။ နီရဲနေသော နို့သီးခေါင်းလေးတဖက်ကို သူ လှမ်းစုပ်ယူလိုက်စဉ် တွင်
မဆီမှ ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ကိုကြား၇သည်။ သူလက်တဖက်ဖြင့် မ ၏ ရင်သားနောက်တဖက်ကို ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်သပ်ပေးနေစဉ်တွင်
‘ဟင်း ….ဟင်း …..မောင်ရယ်’
‘မ ရင်ထဲမှာဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး …. သိလား ‘
မ ၏ စကားသံ တိုးတိုးလေးကိုကြားရသည်။ တဆက်တည်းမှာပင် သူ့ခေါင်းမှဆံပင်တို့ကို ပွတ်သပ်ပေးသလိုလိုနှင့် သူမ၏ရင်သားတို့ကို စုပ်ယူနေသော သူ့ပါးစပ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် ကျောလေးကို မသိမသာလေးကော့ကော့ပေး၏။ သူသိပ်စိတ်မရှည်တော့။ မ ခါးတွင်ဝတ်ထားသော ပိုးသားထမီပျော့ပျော့လေးကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
မ၏နှတ်ဖျားမှ အသံလေးတချက်ထွက်သွား၏။ သူ မ၏ထမီလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ကာ ခုတင်ခြေဂင်းဘက်ဆီသို့ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။
သူ မ၏ ပြောစကားကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ ထွက်ပေါ်လာသည့် မ၏ ဖုံးကွယ်ထားသော အရာများဧ။် အလှတရား ကိုသာ မျက်တောင်မခတ် စတန်းကြည့်နေမိသည်။
‘ဟိတ်…အဲဒီလိုကြီးမကြည်.နဲ.ကွာ…. မ ရှက်တယ်….’
သူ ဘယ်လောက်ကြာကြာ မှင်သက်နေမိသည်မသိ။ မ၏ အသံကိုကြားမှ သတိပြန်ဝင်လာ၏။
သူတိုးတိုးလေးရေရွတ် လိုက်၏။ တကယ်လည်း မ ၏ အတွင်းပိုင်း အစိပ်အပိုင်းများက တကယ်ကို လှပလွန်းပါသည်။ ဝင်းဝါပြီးချပ်၇ယရပ်နေသော ဗိုက်သားတစ်စုံ၊ ထိုမှအောက်တွင်တော့ ရေညှိစိမ်းရောင် အမွှေးနှနှလေးများ ပေါက်နေသော ဆီးခုံဖောင်းဖောင်းလေးတစ်ခု။ အောက်ဖက်မှ
ရွှေအိုရောင်မွှေးညင်းနှနှလေးများပေါက်နေသော ပေါင်တန် ခပ်သွယ်သွယ် တစ်စုံကလည်း သူ့ရင်ခုန်သံကို ပိုမိုမြန်စေ၏။
‘ဟာကွာ… ဘာလို့ အဲဒီလောက်အကြာကြီး ကြည့်နေတာလဲ… ရှက်ပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ ဟာကို့ ….’
‘အင်း ….အဲဒါဆိုလည်း မကြည့်တော့ဘူးဗျာ….’
သူပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် မ၏ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲဖြဲကာ သူ့မျက်နှာကို မ၏ေ-ာက်-ပတ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် မ၏ပေါင်ကြားထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ နီရဲနေသောေ-ာက်ေ-့လေးက ပြူထွက်လျှက် သူ့ကို စိမ်ခေါ်နေသည်ဟု သူခံစားရသည်။ သူ့လျှာကို အပြားလိုက်ထုတ်ကာ ရဲပဒေါင်းခပ်နေသောေ-ာက်-တ်အတွင်းသားများကို တချက် ယက်လိုက်သည်။
(အရမ်းတွေ အထင်ကြီးသွားလား မိတ်ဆွေ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်က အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်အဖေ ပါလာတဲ့ အခွေတွေလည်း ခိုးကြည့်နေတတ်ပြီလေ။ တခါတခါ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့လည်း လစ်ရင်လစ်သလို အောကားလည်း ငှားကြည့်တတ်နေပြီဆိုတော. အမြင်အရတော့ အတွေ့အကြုံ တော်တော်များနေပြီပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အတူဆက်ဆံဖူးတဲ့ ပထမဆုံးသော အတွေ့အကြုံပါဗျာ )
‘အို့….ဟင်း …..အင်း ….. ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ ကလေးရယ် … အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့… မ တော့ ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ..’
မ က ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူ၏ခေါင်းကို သူမ၏လက်အစုံဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ပြီး အတင်းဖယ်ထုတ်၏။ သူ မ၏လက်နှစ်ဖက်ကို အတင်းဖယ်ထုတ်ကာ သူ့လျှာဖြင့် မ၏ စအိုအောက်ခြေဖက်နားလေးမှေ-ာက်ေ-့လေးအထိ ခပ်ဖိဖိလေး သုံးချက်ခန့် ဆင့်ယက်လိုက်၏။
‘အင်း …..မ တော.ငရဲတွေကြီးတော့မှာပဲ ကလေးရယ်….’
မ တိုးတိုးလေးပြော၏။ငရဲတွေကြီးမှာကိုကြောက်သော မ သည် တဖြည်းဖြည်းချင်း ပျော့ပျောင်းလာ၏။ေ-ာက်ေ-့လေးကို သူ့လျှာဖြင့် အပြားလိုက်ကပ်ပြီး သကြားလုံး စုပ်သကဲသို့ တပြွတ်ပြွတ်မည်အောင် အစုပ်တွင် မ၏ခါးလေးကော့ တက်လာ၏။
‘အင်း …..ဟင်း …..ဟင်း …….ရှီး …..ကျွတ်… ကျွတ်…ကောင်းလိုက်တာ…. ကလေးရယ်….’
တဲ့။ သူ့လျှာ၏ အရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားနေရသော မသည် ငရဲကြီးမှာကို မကြောက်တော့ပါ။ သူလျှာဖြင့် မ၏ေ-ာက်- တ်အတွင်းသားနံရများကို လိုက်ယက်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်ေ-ာက်ေ-့လေးအားလျှာဖြင့် ထိုးယက်လေးယက်ပေးသည်။ အချက်သုံးဆယ်ခန့်အရောက်တွင်တော့
‘ ဟင်း ……ဟင်း ……မောင်ရယ်…..မ အရမ်းကောင်းနေပြီ… မ ကိုလုပ်ပေးပါ… အဲလိုကြာကြာလေး လုပ်ပေးစမ်းပါကွာ….. အား … ဟင်း ….အင်း…..’
စကားသံနှင့်တဆက်တည်းပင်။ မ တင်ပါးအစုံက ခုတင်ပေါ်မှ တစ်ပေခန့်အကြာအထိ မြောက်တက်လာ၏။ သူ့လျှာကို ခပ်သွက်သွက်လေး အလုပ်ပေးလိုက်စဉ်တငွ် မ၏ တင်ပါးအစုံက လေထဲတွင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ကော့ပျံလျှက်။
‘အား….. အား …….’
မ၏ လည်ချောင်းသံ ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကို ကြားပြီးနောက် တင်ပါးအစုံက ခုတင်ပေါ်သို့ ဝုန်းကနဲ ပြုတ်ကျသွားသည်။ သူ အသက်ကို ဝအောင်ရှုရင်း မ ကို အပေါ်စီးမှကြည့်မိသည်။ မ ၏မျက်နှာနှနှလေးက နီမြန်းလျှက်။ အောက်နှတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားလျှက်။ မ၏ေ- က်-တ်လေးအတွင်းမှလည်း အရည်ကြည်များက စိမ့်ထွက်လျှက်။
မ ကအသက်ရှုသံပြင်းပြင်းဖြင့် ငေးကြည့်နေသော သူ့ကို ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးပြရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းပေး၏။ သူ ပုဆိုးကိုခေါင်းမှနေ ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး မ၏ပေါင်ကြားထဲသို့ဝင်ကာ မကို သိုင်းဖက်လိုက်၏။ သူ့ငပဲကြီးကလည်း သားစိမ်းနံ့ရသော ကျားရဲတစ်ကောင်ပမာ တဆတ်ဆတ်တုန်လျှက်။ မကို သိုင်းဖက်ထားရင်းဖြင့်ပင် အပေါက်ရှိမည်ဟု ထင်ရသောနေရာကို မှန်းကာ သူနှစ်ချက်ခန့် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးညှောင့်လိုက်၏။ သူ့ငပဲကြီးက ဝင်မသွားပဲ မ၏ေ-ာက-်တ်ကြားမှလျှောတိုက်ကာ
‘ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလည်း ကလေးရာ… လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တာမဟုတ်ဘူး’
‘လုပ်နေတာပဲ မ ရဲ့ ….ဝင်မှမဝင်တာ’
‘ကဲ…ထထ….ဒါဆိုလည်း လက်ထောက်လိုက်… မ ပြမယ်….’
သူ လက်နှစ်ဖက်ကို မ၏ ခါးဘေးတစ်ဘက်ဆီတွင် ထောက်ပြီးခြင်္သေ့ထိုင်ပုံစံသို့ ပြောင်းထိုင်လိုက်၏။ မ ကသူ့ငပဲကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲယူရင်း သူမ၏ေ-ာက်-တ်အပေါက်ဝတွင်တေ့ပေး၏။
‘ကွယ်…နဲတဲ့ ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး….ဒါလား ကလေးတဲ့……’
ပြောရင်းဖြင့် မက သူ့ငပဲတလျှောက်ကို ညင်ညင်သာသာလေးပွတ်သပ်ပေးနေ၏။ သူ မကိုရှက်ပြုံးလေး ပြုံးပြပြီး
‘ အဲဒါကြောင့် မ ကို ကျွန်တော် ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ပြောတာပေါ့ မရဲ့’
‘မောင် ..တခြားဘယ်ကောင်မလေးတွေနဲ့ရော ဒီလိုနေဘူးသလားဟင် …’
‘ဟင်.အင်း ….မောင့်အတွက်တော့ မ ဟာ ပထမဆုံးပဲ.. နောက်ဆုံးလဲဖြစ်မှာပါ’
‘မောင် ..စကားကိုကုန်အောင်မပြောရဘူးလေ …. နောင်တချိန်ကျရင် မထက်လှတဲ့ ကောင်မလေးတွေတွေ့လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ..’
‘တွေ့ခဲ့ရင်လည်း စိတ်မဝင်စားဘူး… ဒီလောက်လှပြီး ဒီလောက်တော်တဲ့ မ ရှိနေပြီပဲဟာ… မောင့်အတွက် ဘာမှမလိုတော့ပါဘူး’
မ ကအရှုံးပေးပါတယ် ဟူသောပုံစံမျိုးဖြင့် ပြုံးကာမျက်လုံးလေးကို မှိတ်ထား၏။
‘မ အတွက်ကော..မောင်က ပထမဆုံးလား…ဟင်’
သူ.စကားအဆုံးတွင် မ မျက်လုံးများ အရောင်တောက်သွား၏။
‘ဟာ…မဟုတ်ပါဘူး…မောင်က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး မေးလိုက်မိတာပါ… မဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်က ချစ်ပြပြီးသားပါ… ဒါတွေက ဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူး’
‘မောင့်အတွက် ပထမဆုံး ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ ပြီးရင်သိရမှာပေါ့ … မောင်ရယ်…’
စကားအဆုံးတွင် မ ကသူ့ငပဲကြီးကိုကိုင်ကာ သူမ၏ေ-ာက်-တ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လျှောတိုက်ပေး၏။ တခါတရံတွင် မ၏အစေ့လေးနှင့် သူ့ငပဲကြီးတိုက်အမိတွင် မ ၏ ခါးလေးကော့ကော့သွား၏။ နှတ်ဖျားမှလည်း
‘ဟင်း …….ဟင်း …….ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်…..ကောင်းလိုက်တာ’
ဟုတဖွဖွရေရွတ်နေ၏။ ဆယ့်ငါးချက်ခန့် လျှောတိုက်ပေးအပြီးတွင်မတော့ သူမနေနှိင်တော့
‘အင်း ……ဒါပေမယ်.ဖြေးဖြေးပဲလုပ်နော်…. မ…နာမှာကြောက်တယ်…..’
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို မ ၏ အပေါက်ဝလေးထိပ်တွင်တေ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် အထစ်မြုပ်သည်ဆိုရုံလေး စသွင်းကြည့်လိုက်သည်။ တစ်လက်မခန့်တော့ ဝင်သွားသည်။ ထိုတစ်လက်မခန့်နှင့်ပင် ဖြေးဖြေးလေး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ဆယ့်ငါးချက်ခန့် လုပ်နေလိုက်သည်။ မ ကိုငုံ့အကြည့်တွင် မ မျက်လုံးလေးများကမှေးစင်းလျှက်။ သူ မ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ ဝမ်းလျှားမှောက်လိုက်ပြီး
လက်တဖက်ကို မ၏လည်ပင်းအောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ မနှတ်ခမ်းလေးကို တချက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စုပ်ယူလိုက်၏။ ထို့နောက်
‘ကောင်းတယ်….ကလေးရယ်…ဆိမ့်သလိုလို ကျင်သလိုလိုနဲ့ အရမ်းကောင်းတာပဲ’
‘မ…ဒါဆို ကျွန်တော်အကုန်ဝင်အောင် ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်….’
‘မဟုတ်သေးဘူး မရဲ့.. အဖျားလောက်ပဲ ဝင်သေးတယ်’
စကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်တည်း သူဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကို အားယူကာ လက်တဖက်ကလည်း မ၏ပခုံးတဖက်ကို လည်ပင်းအောက်မှလျှိုကိုင်ရင်း ဆောင့်သွင်းချလိုက်သည်။ နွေးထွေးစွတ်စိုသော မ၏ောက်တ်နံရံများမှပေးသော ကာမအရသာသည် သူ့ငပဲကြီးမှတဆင့် ဦးနှောက်သို့လာဆောင့်၏။ မ၏နှတ်ဖျားမှ ဘာတွေကို တဖွဖွရေရွတ်နေသည် ဆိုသည်ကိုလည်း သူမသိတော့။
သူခါးကိုအားယူကာ မ၏အပေါက်ထဲသို့ သူ့ ညီလေးအား ချော့သွင်းလိုက်သည်။ ညီလေးက လျှောလျှောလျှူလျှူဝင်မသွား၊ အထဲတွင် ဘာမှန်းမသိသော အရာတစ်ခုက တားဆီးထားသလို ခံစားရသည်။ သူ့ညီလေးကို အပြင်သို့ အထစ်ဖျားအထိပြန်ထုတ်ကာအားဖြင့် နောက်တစ်ခါဆောင့်သွင်းလိုက်၏။ တားဆီးထားသော အရာက ကျွံဝင်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး နွေးထွေးအီဆိမ့်သော အရသာက သူ့ညီလေး၏ဒစ်ဖျားမှအရင်းဆီသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် စီးဝင်လာ၏။ တဆက်တည်းမှာပင် မ၏နှတ်ဖျားမှ
ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ သူနောက်မဆုတ်ချင်တော့ပါ။ မ၏ငြီးတွားသံကို သူမကြားချင်ယောင်ဆောင်ရင်း သူ့ညီလေးကိုသာ အာရုံစိုက်ကာ တချက်ချင်းသွင်းယူ၏။ မ၏ နှတ်ဖျားမှတော့
‘နာတယ်…မောင်ရယ်…မောင်..မကိုမသနားဘူး… အရမ်းလုပ်တာပဲ ..နာပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ဟာကို့..’
ငိုသံပေါက်နေသော မ၏စကားသံကြောင့် သူသတိပြန်ဝင်လာ၏။မကိုကြည့်တော့ မျက်ရည်လေးများပင်ဝဲလျှက်။
‘မလုပ်နဲ့လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးမောင်ရဲ့… ဖြည်းဖြည်းလုပ်ဖို့ပြောတာ… မောင်ခနပြန်ထုတ်လိုက်စမ်း…’
အမိန့်ကိုနာခံတတ်သော ရဲမက်တစ်ယောက်ပမာ သူခါးကိုဆန့်ပြီး သူညီလေးကိုပြန်ထုတ်၏။ သူ့ ညီလေးကိုငုံအကြည့်တွင် ညီလေးတွင် ပေကျံနေသော သွေးစများကိုသူတွေ့၏။
‘ဟာ…သွေးတွေ ..သွေးတွေ.. မဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် ..’
မကသူ့ကိုဆရာမကကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ကြည့်သောမျက်လုံးမျိုးဖြင့် ဝေ့ကြည့်သည်။ ထို့နောက်
‘မောင်ကို မ ပြီးရင်သိရမယ်လို့ ပြောထားတာပဲလေ…မောင်ရဲ့’
မကသူ့ကို ဒါလေးတောင်မှမသိရရန်ကော ဆိုသော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်ပြန်၏။ ပြီး….
‘ရှင်လုပ်နေတာ အပျိုစစ်စစ်လေးမို့လို့ သွေးထွက်တာတော်ရေ… အပျိုစစ်စစ်လေးမို့လို့ သိရဲ့လား…. တခါတည်း ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား… ဟွန်း…မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ… လုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်… တော်ကြာ မမြင့်အေး ပြန်လာလို့ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ်…’
သူရင်ထဲတွင် ဘုရားပွဲလှည့်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွား၏။
ကျွန်တော့်ငပဲကို မမသဲ။ အပေါက်ဝတွင် သေသေချာချာ တေ့လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်သည်။
‘အင်း…နဲနဲတော့နာတယ်…ရပါတယ်… မောင်လုပ်ပါ… မ အောင့်ခံပါ့မယ်’
ကျွန်တော် မမသဲရဲ့ နဖူးပြေပြေလေးကို ညင်ညင်သာသာလေးနမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်လန်ကျောက်ကို မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ်နုနုလေးထဲတွင် ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်၏။
လေးငါးခြောက်ချက်ခန့် အပြီးတွင် မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ်အတွင်းမှ ကာမ၏ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးများ ထွက်လာ၏။ ထိုအရည်လေးများကြောင့် လုပ်ရသသည်မှာ အရင်ကလိုမကျပ်တော့ပဲ လျောကနဲ လျောကနဲဖြစ်လာ၏။ အချက်၂၀ခန့်အရောက်တွင်
‘မောင်…အား…မောင်…မောင့်ကို အရမ်းချစ်တယ်ကွာ…မမသဲကို ဒီထက် နဲနဲမြန်မြန်လေး လုပ်ပေးစမ်းပါကွာ… မမသဲ ကောင်းလွန်းလို့ပါ…အား…မောင်….အား…. ကလေးရယ်…မမသဲ ဘယ်လိုနေရမလဲ မသိတော့ဖူးကွာ’
မမသဲ၏ နှုတ်မှ ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသော အသံများက ကျွန်တော့်စိတ်များကို ပိုမိုတက်ကြွစေ၏။ ကျွန်တော် ခါးကိုပြန်ဆန့်လိုက်ပြီး မမသဲ၏ ချေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမလိုက်ကာ အနေအထားကိုပြင်လိုက်၏။ ထိုအခါ မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ်လေးက ပြူးထွက်လာကာ ဖင်လေးကလည်း အောက်မှအိပ်ယာအထက်သို့ ခြောက်လက်မခန့် မြောက်တက်လာ၏။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် အားရှိပါးရှိဆောင့်တော့သည်။ မမသဲထံမှ ဘာသံမှ ထွက်မလာနိုင်တော့။ မမသဲ၏ ဖြူဝင်းသော မျက်နှာလေးသည် ရမက်စိတ်ကြောင့် ရဲရဲနီလျှက်။ နီတျာတျာ နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံက တဆတ်ဆတ်တုန်လျှက်။ အချက် ၅၀ခန့် အရောက်တွင်မတော့
ခပ်နာနာလေးဆောင့်ပေးစမ်းပါ… အေးဟုတ်ပြီ… အဲလိုလေး…အား….ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်..ကောင်းလိုက်တာ..’
ပြောရင်းဆိုရင်းဖြင့် မမသဲက သူ့ခါးလေးကို ကျွန်တော့ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ ကော့ပေးနေရာမှ ကျွန်တော့်ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံဖက်ကာ ဇတ်ကနဲကော့ပေးရင်းဖြင့်
ကျွန်တော့်မှာသာ ဆန့်တငံ့ငံ့နှင့် မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ်၏ ဆွဲညှစ်လိုက်… ပြန်လျှော့လိုက် လုပ်နေခြင်းကို အမောဖြေရင်းငြိမ်နေရ၏။ ခဏလောက်ကြာတော့
‘အာ…ဘယ်ဝဦးမလဲ မရဲ့… အခုမှကောင်းတုန်း ရှိသေးတာ… မကိုသနားလို့ ‘
‘အလိုက်သိလိုက်တာ …ကလေးရယ်.. အဲဒါတွေကြောင်. မကချစ်နေရတာ’
‘မရယ်…မကိုဘယ်တော့မှ ပစ်မသွားဖူး… စိတ်ချစမ်းပါ…မ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲချစ်မှာပါဗျာ’
သူ အားကျမခံ မမသဲရဲ့လည်တိုင်နုနုလေးကို နမ်းရင်း စကားတွေ တတွတ်တွတ်ပြောနေလိုက်တယ်။
‘မောင် ..မဝသေးရင်လုပ်လေ…ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ‘
‘အင်း…မောင်လုပ်ချင်သေးတယ်.. မ စိတ်မဆိုးဖူးဆိုရင် မောင်နောက်က လုပ်ချင်တယ် မရယ်’
‘ဟင်း…မောင်နော် ..ခလေး..ခလေးနဲ့ အတတ်ဆန်းတွေ ဘယ်ကတတ်လဲ… မလုပ်ပါနဲ့ကွာ… ရိုးရိုးပဲလုပ်ပါ မောင်က စကားနားထောင်ပါတယ်နော်ကွာ…နော်’
မမသဲ စကားအဆုံးမှာ ကျွန်တော်ကလေးဆိုးကြီး တစ်ယောက်လို မျက်နှာကိုစူပုတ်နေလိုက်တယ်။ မမသဲက ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ခပ်စူးစူးတချက်ကြည့်ပြီး
“မောင်….နောက်ကလုပ်ချင်လည်း လုပ်ပါကွာ… ဒါပဲနော်… မမသဲကိုတော့ တစ်ခါတည်းနဲ့ ကုန်းတဲ့ မိန်းမဆိုပြီ အထင်မသေးရဖူးနော်.. မောင့်ကို အရမ်းချစ်လို့ အလိုက်တာ သိရဲ့လား’
ပြောရင်းနဲ့ မမသဲက လှဲနေရာကထထိုင်ပြီး ခုတင်ပေါ်မှာ လေးဖက်လေးကုန်းပေးတော့သည်။
မမသဲ၏ဖင်ကြီးက ကုန်းလိုက်မှပင် ပိုအသက်ဝင်လာ၏။ နောက်ဖက်တွင် ပြူးထွက်နေသောေ-ာက်ပတ်လေးက ရဲရဲနီလျှက် သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေ၏။ သူ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ပြူးထွက်နေသောေ-ာက်ပတ်လေးကိုလျှာဖြင့် အပြားလိုက်တချက်ယက်လိုက်၏။
မမသဲထံမှ အသံလေးတချက်ထွက်လာပြီး ခါးလေးခွက်ဝင်သွား၏။
မမသဲစကားအဆုံးတွင် သူ မမသဲ၏ဖင်နောက်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ နေရယူလိုက်ပြီး သူ့ငပဲကြီးကို မမသဲ၏စိုရွှဲနေသောေ-ာက်ပတ်အိအိကြီးထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးက မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ် လမ်းကြောင်းတလျှောက် လျှောကနဲ ဝင်အသွားတွင် မမသဲ၏ ခါးလေးကကုန်းထလာ၏။ ကျွန်တော်ခါးလေးကို ပြန်တွန်းချကာ မမသဲ၏ဖင်နှင့် ကျွန်တော့်ဆီးခုံကပ်သွားအောင် ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
ကျွန်တော်လက်ဖြင့် ဖိထားသောအားကြောင့် မမသဲ၏ခါးလေးက ခွက်ဝင်နေသောကြောင့် ဖြူဖွေးလုံးဝန်းသော ဖင်လေးနှစ်လုံးကလည်း နောက်သို့ကော့ထွက်နေသဖြင့် လုပ်ရသည်မှာ
အရသာရှိလှ၏။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ ဒါကြောင့်မို့လို့ ယောင်္ကျားတွေ အိုးကောင်းကောင်း
မိန်းမတွေကို မက်မောကြတာပေါ့ ဟုတွေးလိုက်မိသည်။ အရသာကတော့ ပြောမယုံကြုံမှသိ ဆိုသလိုပင် ပါးစပ်ဖြင့် ပြောပြရန် ဥပမာရှာခက်လှ၏။
ဆယ်ချက်ခန့် အဆောင့်ပြီးတွင်မတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှတောင့်ထားမရအောင် ပြီးချင်လာသည်။ ယောင်္ကျားလေးတို့သဘာဝအရ ကျွန်တော်လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို မာစတာဗေးရှင်းတော့ မကြာခဏ လုပ်ဖူးပါသည်။ ဒါပေမယ့် မိန်းခလေးတစ်ယောက်၏ေ-ာက်ပတ် အသစ်စက်စက် နုနုဖတ်ဖတ်လေးထဲတွင် ပြီးရသော အရသာကတော့ ဘာနှင့်မှ လဲမရအောင် ကောင်းလွန်းလှသည်။
ကျွနတော် မမသဲ၏ကိုယ်ပေါ်တွင်မှောက်ခါ ငပဲကို မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ်လေးထဲတွင်နှစ်မြုပ်လျှက်
၃မိနစ်ခန့် ငြိမ်နေလိုက်သည်။ မမသဲလည်း နောက်တခါထပ်ပြီးသွားသည် ထင်သည်။ မမသဲ၏ေ-ာက်ပတ် အတွင်းသားများမှ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆွဲညှစ်လိုက် ပြန်လျော့လိုက်လုပ်နေသော အထိအတွေ့ကို ငပဲမှတဆင့် ခံစားနေရသည်။
‘ကဲ ….ထပါဦး မောင်ရယ်…တကတည်း… ဇိမ်ယူနေလိုက်တာ…’
‘ကောင်းတာကို…မမသဲရဲ့… မမသဲရော… မကောင်းဖူးလား…ဟင်’
‘ကောင်စုတ်ကလေး… ဘာတွေလာမေးနေတာလည်း.. သွား…ရှက်စရာ…’
‘သြော်..ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာ… မိန်းမကတော့မိန်းမပဲ ..ရှက်တာပေါ့ကွ’
‘ကောင်းပါသတဲ့ရှင့်..ကောင်းပါသတဲ့ ဆွေမေ့ မျိုးမေ့ကို ကောင်းပါတယ်တဲ့’
‘အာ…မနောက်နဲ့ မမသဲရာ.. ကျွန်တော်တကယ်အတည်ပြောနေတာ… သိချင်လို့ပါ…ကျွန်တော်ကောင်းသလို
‘အင်း….ကောင်းတယ်မောင်ရဲ့ တကယ်ကိုကောင်းတာ… မမသဲအဲလို အရသာကို ခံစားဖူးတာ..ဒါပထမဆုံးပဲ’
မမသဲက သူ့ကို လက်၅ချောင်းထောင်ပြတယ်။
ငါး ခါပေါ့လေ။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာကို တွေတွေလေးစိုက်ကြည့်ပြီး
‘မောင်..မောင်ဟာ မ ဘ၀ရဲ့အပျိုရည်ကို စပေးခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးချစ်သူပါ…မ အရင်က ရည်းစားတွေ အများကြီးထားခဲ့ပေမယ့် မောင့်လိုတစ်ယောက်ကိုမှ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါပုံအပ်ပြီး မချစ်ခဲ့ဖူးဘူး မောင်… မောင်ကလည်း… မအပေါ်မှာ သစာရှိရှိနဲ့ ချစ်သွားစေချင်တယ် ..မောင်ရယ်..’
ကျွန်တော် မမသဲ၏ကိုယ်လေးကိုဆွဲဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်သည်။
‘စိတ်ချစမ်းပါ…မရယ်..မဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါ…’
ဒီလိုနှင့် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတွေပိတ်ထားသော နွေရာသီတစ်ခုလုံး တပါတ်ကို နှစ်ခါလောက်
မမြင့်မြင့်အေးတို့အိမ်တွင် ချိန်းတွေ့ ဖြစ်ကြသည်။ တွေ့ဖြစ်ကြတိုင်းလည်း မမြင့်မြင့်အေးက အကြောင်းတခုခုပြကာ ရှောင်ပေးတတ်သဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ချစ်တင်းနှောခွင့်ရကြသည်။
ပထမပိုင်းတွင်တော့ ကျွန်တော်က ဦးဆောင်သူ၊ နောက်တွင်တော့ မက ဦးဆောင်လာတတ်သည်။
အကြိမ်ရေများလာသဖြင့် သူမက အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာသည့်သဘောပင်။
ချစ်တင်းနှောပြီးတိုင်း သူမပြောလေ့ရှိသည့် စကားကတော့
ဟူသော စကားပင်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုနှင့် ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့် လာခဲ့သည့်။ ကျွန်တော်က ကိုးတန်း ကိုစတက်ရသည်။ မက ဆယ်တန်းကို နှစ်နှစ်ကျသဖြင့် ဆယ်တန်း ရက်ပီတာ ခန်းမှာတက်သည်။ မကတော့ ပြောလေ့ရှိသည်။
‘မောင်ရှိနေလို့သာ မ ကျောင်းပြန်တက်တာ သိလား… မ သဘောသာဆိုရင်… အပြင်မှာ ကျူရှင်တက်ပြီးဖြေမှာ.. နောက်ပြီးကျောင်းမှာက ပျော်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းလို့’
အပျော်အပါး အလွန်မက်သော မသည် ကျောင်းစစတက်ခြင်း တစ်လလောက်သာ ခြေငြိမ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းရက်များတွင်တော့ မခြေလှမ်းများပျက်လာသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက်ခန့် ကျောင်းရှေ့ သစ်ပင်ကြီးအောက်တွင် မကို စောင့်ခဲ့ရသော ကျွန်တော်၏ အချိန်ဇယားများထဲတွင် မကိုတွေ့ရသော ရက်တွေသည် အလွန်ဆုံးရှိမှ တစ်ရက် နှစ်ရက်သာဖြစ်သည်။ မေးသောအခါတွင်လည်း အိမ်ကအမေနေမကောင်းလို့၊ ကျူရှင်အရေးကြီးလို့ စသည်ဖြင့် မရေရာသော အဖြေများကိုသာ ပေးစမြဲဖြစ်သည်။
ခဏခဏမေးပါများသောအခါ ကျွန်တော့်ကို ကလေးက ကလေးလိုမနေဖုး လျှာရှည်ရန်ကော ဟုဆိုကာ မာန်မဲတတ်သေးသည်။ ချစ်ခြင်း၏နောက်ကွယ်မှ ရလာဒ်များသည် လူကို လွန်စွာမှ ပူလောင်စေ၏။ ရည်းစားဦးမို့ ရှုးရှုးမိုက်မိုက်ချစ်ရသော ကျွန်တော်သည် စားလည်း မစိတ်၊ သွားလည်း မစိတ်ဖြင့် ကြာလာတော့ လူနှင့် အာရုံသိပ်မကပ်ချင်တော့။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပထမအစမ်း စာမေးပွဲတွင် ကျွန်တော် လေးဘာသာကျ၏။
ဘာသာရပ်တိုင်းလိုလိုတွင် အမြဲတန်း ၈၀ကျော်ရလေ့ရှိသော ကောင်က လေးဘာသာ ကျသဖြင့် အားလုံးကကျွန်တော့်ကို အံ့အားသင့်ကြ၏။ ဆရာမ စာပြလျှင်လည်း စိတ်ကမ၀င်စားချင်တော့။ အချိန်ရှိသရွေ့ မ အကြောင်းသာ၊ မ မျက်နှာသာ တဝဲလည်လည်ပေါ်နေ၏။
သူ မမသဲနှင့် မတွေ့တာ တပါတ်ခန့် ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ တပါတ်မြောက်ပြီး နောက် ၂ ရက်ခန့်အကြာတွင်မတော့ သူ့စိတ်ကို ဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ ။
မမသဲ ကျူရှင် အပြန်ကို သွားစောင့်မည်ဟုစိတ်က ရည်ရွယ်လျက် မမသဲကျူရှင်တက်ရာ မြင်သာ ဖက်သို့စက်ဘီးလေးကို ဆွဲကာထွက်လာခဲ့သည်။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် မမသဲက သူ့ကိုဘယ်တော့မှ ကျူရှင်တွင် လာကြိုခိုင်းလေ့မရှိ။ သူက မမသဲတို့လမ်းထိပ်တွင်သာ စောင့်ရလေ့ရှိသည်။ သူက မမသဲကို လာကြိုခွင့်တောင်းသောအခါ မမသဲက
‘မလာပါနဲ့ မောင်ရယ် ..မောင်က ပုံစံလေးက ခပ်မိုက်မိုက်လေးဆိုတော့ ကျူရှင်မှာရှိတဲ့ ကောင်တွေက ကျူရှင်က အဆော်တွေကို မောင်လာပတ်တယ်ထင်ပြီး ရန်တွေ ဘာတွေဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ပါ… နောက်ပြီး အဲဒီဘက်က နည်းနည်းလည်း စရိုက်ကြမ်းတယ်.. မောင်ရဲ့ အဲဒါကြောင့်ပါ…’
ဟုသူကပြောလျှင် မက သူ့ရင်ဘတ်လေးကို ဖိပြပြီး
‘ဒါကြီးက ကလေးတဲ့လား.. ဟွန်း… အကြောင်းမသိတဲ့လူဆို ၁၉နှစ်သားလောက် ထင်ရတယ်’
ဟုပြန်ပြောတတ်သည်။ သူပြိုင်ဘီးလေးကို နင်းကာ မတို့ကျူရှင်ဘက်သို့ ထွက်ခဲ့သည်။ မတို့ကျူရှင်ရှေ့အရောက် လက်မှာပတ်ထားသော နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၆နာရီထိုးရန် ၁၀မိနစ်။ ရှေ့တွင်ရှိသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထိုင်စောင့်ရန် သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှကြည့်လျှင် ကျူရှင်ဆင်းသည်ကို တန်းမြင်နေရသည်။
သူလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်ကာ ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာကာ ထိုင်နေလိုက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကတော့ မပြောသလိုပင် ရပ်ကွက်က သိပ်မသန့်သော သဘောမှာရှိသည်။ ထောင့်စားပွဲမှာ ထိုင်နေသော သူ့အရွယ် ကောင်လေးငါးယောက်က သူ့ကို ပေစောင်းစောင်းဖြင့် မိုက်ကြည့်ကြည့်နေ၏။ သူမသိကျိုးကျွန်ပြုကာ လမ်းမဖက်သို့ မျက်နှာ ယပြုပြီးထိုင်နေလိုက်၏။
ကျူရှင်ဆင်းပြီ။ အရောင်စုံ… အရွယ်စုံလူတွေ ထွက်ကျလာ၏။ လူအားလုံး၏နောက်တွင်ကမှ သူသိပ်ချစ်ရသော မ ထွက်လာ၏။ မ ထွက်လာချိန်တွင် သူ့ကျောဖက်မှ ခပ်ကျယ်ကျယ်စကားသံကို ကြားရသည်။
‘ဒီအတိုင်းတော့ မဟုတ်ဖူး…ဟေ့ကောင် …ကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ လိုက်တယ်ကွ’
‘သြော် .မယုံရင်စောင့်ကြည့်လ.. ခဏနေ ကားနဲ့ လာခေါ်လိမ့်မယ်’
သူ့ နောက်ကျောဖက် ဝိုင်းမှ ထွက်လာသော စကားသံဖြစ်၏။ သူနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
‘-ီး ကြည့်တာလား…ဟေ့ကာင် ဘာကြည့်တာလဲ ..’
သူဒေါသကို မျိုသိပ်လျှက် လမ်းဖက်သို့ မျက်နှာပြန်မူလိုက်သည်။ အဲဒီအခါမှ ပိုဆိုးသွားသည်။ မြင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းက သူ့ဒေါသသွေးတို့ကို ဆူဝေစေ၏။ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် နွဲ့နွဲ့လေးရပ်နေသော မ၏ဘေးသို့ စပရင်တာ ကားအနီရောင်လေး တစ်စင်းထိုးရပ်သွားသည်။ ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသည်က ကျွန်တော့်ထက် လေးနှစ်ခန့် ကြီးပုံရသော တရုတ်တကောင်။ မက ထိုတရုတ်ကောင်အားပြုံးလျှက် စကားတွေပြောနေ၏။ သူ့ မျက်စိထဲတွင် ဘာမှမမြင်တော့။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှ ထထွက်ပြီး လမ်းတဖက်ကို ပြေးသွား၏။ ပြီးလျှင် မ၏ဘေးကိုကပ်သွားပြီး မ၏လက်ကိုဆွဲကာ
သူဒေါသသံဖြင့် မကိုအော်ခေါ်လိုက်သည်။ မက သူ့ကို အံ့အားသင့်သော မျက်ဝန်းများဖြင့် ကြောင်ကြည့်နေကာ
ဟုခပ်ဖွဖွရေရွတ်၏။ မ၏ရေရွတ်သံသည် နှုတ်ဖျားကတော့ ထွက်မလာပေ။ ထိုကဲသို့ ထွက်မလာရန်လည်း မသည် အတော်ကို ကြိုးစားထိန်းချူပ်ထားပုံရသည်။ ထိုအချိန်တွင် တရုတ်ကောင်က မကိုဆွဲကိုင်ထားသော သူ့လက်ကို ဆတ်ခနဲ ပုတ်ချကာ
‘ဒီကောင်က ဘယ်ကကောင်လည်း သဲဇော်… ဘာလာရှုပ်တာလဲ…နင်နဲ့သိလား’
မဆီမှ ရုတ်တရက်အဖြေထွက်မလာ။ ခဏလောက်ကြာမှ
‘ဒါ…ငါ့ဝမ်းကွဲမောင်လေးလေ…ဖရန်ကီရဲ့ ငါ့ကို အိမ်ကလာကြိုခိုင်းတာနေမှာပေါ့ ‘
‘လိုက်မှာပေါ့ ဖရန်ကီရဲ့ အေးဆေးပါဟာ… အိမ်ပိုင်ပါတယ်..’
သူ မ၏ လက်ကိုဆွဲကာ တုန်နေသောအသံဖြင့် ပြောလိုက်သည်။
‘အာ…မရဖူး….ဒီထိတောင်လာခေါ်နေတာ … အားနာစရာလိုက်သွားမှာပဲ ..’
သူ မ မျက်နှာကို ဒေါသခိုးတွေလျှံနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ပီး အော်လိုက်တယ်။ မ က သူ့မျက်လုံးများကို ရင်ဆိုင်မကြည့်ပဲ မျက်နှာလွှဲသွားသည်။ ပြီးတော့
‘မကိုယ် မ ပိုင်တယ်…အောင်မော်သန့် မင်း မကိုဘာမှ ချုပ်ချယ်စရာမလိုဖူး… မင်းပြန်တော့’
ကားထဲမှ တရုတ်ကောင်၏အသံအဆုံးတွင် မသည်ကားပေါ်သို့ စွေ့ကနဲ တက်သွားသည်။
ကားလေးက မြင်းတစ်ကောင်ပြေးသလို ဝေါကနဲ မောင်းထွက်သွားသည့်။ မကတော့ သူ့ကို
သူဒေါသစိတ်တို့ကြောင့် မျက်လုံးများက ပြာဝေနေသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် သူထိုင်ချလိုက်သည်။ ရင်တစ်ခုလုံးသည် ပူလောင်လျှက်။ သူ့ဘ၀တွင် ဒီလောက်နာကျင်ရသော ခံစားချက်ကို ခံစားရခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ပင်ဖြစ်သည်။ သူအိမ်သို့ ဘယ်လိုပြန်ရောက်လာမှန်းပင်မသိ။
‘မ…ကိုဘယ်တော့မှ ခွဲမသွားပါနဲ့ မောင်ရယ် …’
ဟုတဖွဖွပြောတတ်သော မသည် သူ့ကို တိမ်ထူသော ဆောင်းရာသီ၏နေ့တနေ့တွင် ရက်ရက်စက်စက် အစိမ်းခြွေ ခြွေကာခွဲခွာသွားခဲ့၏။ မဆီက သူရခဲ့သည်များကတော့ မ၏ လက်ရေးဝိုင်းလေးများဖြင့် ရေးထားသော
‘အသက်အရွယ်ခြားနားလွန်းလို့ လူတစ်ယောက်ရင်ထဲမှာ ဘာတွေရှိမယ်ဆိုတာ နောက်တယောက်က မသိနိုင်တဲ့အတူတူ
ဟုရေးထားသော စာတိုလေးတစ်စောင်နှင့် သူက မကို တစ်ပတ်တခါ ပေးလေ့ရှိသော ချောကလက်ခွံလေးများသာ။ ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ရသည်များကတော့ ရင်ခွင်တစ်ခုနဲ့ အသစ်စက်စက်နှလုံးသားတခြမ်း ။ သူစိတ်တွေ အတော်ကိုလေနေသည်။